China 100% Cotton Pfupi Sleeve Varume T-Shirt PY-ND004 Kugadzira uye Fekitori | Pinyang
Yakasarudzika logo pateni isina chinhu yakatenderera mutsipa T-shirt
Chigadzirwa Chigadzirwa: T-shirt jira ruzivo, unoziva zvakadii?
1. Chii chinonzi gramu uremu?
Kurema kweGram kunowanzo shandiswa kuratidza hukobvu hwejira. Iyo yakakura huremu, inowedzera nguvo. Kurema kweT-shirt kazhinji kuri pakati pe160g ne220g. Kana yakatetepa, ichave yakajeka. Kana iri gobvu rakawandisa, ichave yakasviba. Kazhinji, zviri nani kusarudza pakati pe180-260g. (mahembe mapfupi anowanzoita 180-220g, inova chete ukobvu hwakakodzera kupfeka. Ruoko rurefu maT-shirts kazhinji anosarudza machira e260g, ari erudzi rwakakora)
2. Chii chinonzi bazi nhamba?
Tsanangudzo: kureba kwemayadhi ekotoni nehurema hwakaenzana wepondo imwe.
Yakakora Count Yarn: yakachena yekotoni shinda ine gumi nemasere kana mashoma kuverenga, anonyanya kushandiswa kuruka micheka yakaoma uye inorema kana kusimudza nekusunungura machira ekotoni.
Yepakati yekuverenga shinda: 19-29 kuverenga shinda yekotoni. Inonyanya kushandiswa kune dzakarukwa nguo nezvakawanda zvinodiwa.
Yakanakisa kuverenga shinda: 30-60 kuverenga jira rekotoni. Inonyanya kushandiswa kune yakakwira-giredhi knitwear. Iyo yakakwira iyo kuverenga iri, yakapfava iri. Iwo maT-shirts anowanzo kuve 21 uye 32.
3. Chii chinonzi kuyanana?
T-shirt shinda yekotoni inogona kuganhurwa kuita tambo yakasanganiswa uye yakasanganiswa.
Musanganiswa wakasanganiswa: zvinoreva shinda yakarukwa nemubato wekusona wakasanganiswa, unozivikanwawo seusina kusungwa.
Musanganiswa wakasanganiswa: zvinoreva shinda inogadzirwa nekuwedzera maitiro ekuzora kune shinda yakakoswa painotenderera nemhando yepamusoro yekotoni fiber senge mbishi. Pamusoro pejira rinenge rakachena uye rakapfava.
4. Ndeipi nzira yekudhinda T-shirt?
Kudhindwa kweT-shirt kwakakamurwa kuve kudhinda kwechidzitiro uye kuchinjisa kudhinda.
Screen yekudhinda: iyo tekinoroji yakaomarara, kunyanya inosanganisira dhizaini, firimu, kudhinda, kuomesa matanho akati wandei. Izvo zvakanakira kudhinda kwechidzitiro kwakakwirira kwemavara, kusimba uye kushaya. Nekuda kweiyo yakakwira ndiro inoita mutengo wescreen kudhinda, kugadzirwa kwemazhinji kunodiwa kudzikisa mutengo, uyo usingakwanise kusangana nezvinodiwa zveimwe chete kana diki batch.
Chinja kudhinda: inozivikanwawo senge inopisa kutsika. Izvo zvakanakira yakajeka ruvara uye tekinoroji yakapusa. Izvo zvinokanganisa ndezvekuti iko kusimba kwepateni kwakashata, kusingagadzike kupfeka uye kuwacha.
5. T-shati yakasungwa sei?
Hunhu hwekurapwa kwekubvisa ndeyekubvisa fuzz yakaumbwa pamusoro pejira nekuda kweasina kumonera fiber uye inobudikira faibha, kuitira kuti jira riwedzere kutsetseka uye rakanaka, uye jira rejira rakaenzana, uye rinogona kudhinda mapatani akajeka uye akanaka.
6. Ndezvipi zvakanakira T-shati donje jira? Nei uchiwedzera spandex?
Mucheka wakachena wedonje unoratidzwa nemubato wakanaka, wakasununguka uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, asi zviri nyore kuunyana. Kuwedzera diki yespandex kunogona kuvandudza zvakanyanya hunhu hwejira, kuwedzera zvakanyanya kusimba kwemucheka, uku uchichengetedza magadzirirwo uye kugadzikana kwekotoni yakachena. Uye zvakare, kuwedzera spandex kune iyo neckline kunogona kudzivirira iyo neckline kubva mukusunungura uye deforming, uye chengetedza kusingaperi kwekusimba kweiyo neckline.
Blank rakatenderedza mutsipa sleeve T-shati, yakanakisa donje, yakapfava, yakachena uye yakasikwa, hapana zvinhu zvinokuvadza, yakachengeteka uye yakagadzikana. Yakasarudzika crew mutsipa dhizaini, yakasununguka uye yakapfava, inowedzera simba. Zvakareruka mafashoni cuffs, wakanaka basa, wakasununguka kufamba. Tekinoroji yemotokari, kuwanda kuri kuvandudza, kukwana kwakaringana. Mhando dzakasiyana dzekudhinda, dzehunyanzvi tsika-dzakagadzirwa mbatya dzebasa, mbatya dzepati, mbatya dzekirasi, mbatya dzekuita, mbatya dzechikwata, mbatya dzemubereki nemwana, nezvimwe.
Chigadzirwa chinoshandiswa: kushambadzira, Hoodie, zvipfeko zveboka, wega magadzirirwo, nezvimwewo, zvinogona kugadzirisa ruvara, pateni, logo.
Technics: Akadhindwa Ekudhinda Maitiro: Dhijitari kudhinda
Nzvimbo Yekutangira: Jiangxi, China Zita reBrand: PIN YANG YU
Model Nhamba: PY-WW003 Feature: Anti-kuunyana, Inofema, Kuwedzera Kukura, Yakasimba
Collar: O-Neck Mucheka Kurema: 180 Gramu
Inowanikwa Huwandu: 4480 Chinyorwa: 100% donje
Sleeve Chimiro: Pfupi sleeve Dhizaini: Blank, Tsika Yakagamuchirwa
Rudzi rweMhando: Dhinda Dhindaina: Smart Casual
Rudzi rweJira: Yakaipisisa mazuva manomwe sampuro yekuraira inotungamira nguva: Tsigiro
Kukura: Yakasarudzika Saizi Logo: Gamuchira Yakasarudzika Logo
Sleeve: Pfupi Leeve Kurongedza: 1pc / Opp Bhegi
Chigadzirwa zita: isina mashati Mwaka: Zhizha Kupfeka
Mucheka: 100% donje
A1: Isu tiri mugadziri iri mudunhu reJiangXi, uye isu tine 500㎡ kambani kuGuangzhou, China.
Q2: Hatina dhizaini dhizaini izvozvi, tinogona kugadzira mahembe acho?
A2: Hongu chokwadi, pls tiudze pfungwa yako nezveshirts, mugadziri wedu achakubatsira kupedzisa dhizaini.
Q3: Ndeipi yako nguva yekuendesa?
A3: Sample kazhinji 3-7days mushure mekubhadhara, Yeakarongedzwa odha, Zvinoenderana nezvigadzirwa & huwandu.
Q4: ndinogona kusanganisa nemhando dzakasiyana?
A4: Chokwadi unogona!
Q5: Ndeipi yako yemuenzaniso mutemo?
A5: Kune yakasarudzika sampuli, isu tinobhadharisa sampu fizi asi tinoidzosera iyo kana hombe yaodha kupfuura maseti zana
Q6: Ndingawane here mutengo wakaderera kana ndikaraira yakawanda?
A6: Ehe, mitengo yakachipa ine yakawanda yakanyanya kuwanda maodha.
Q7: Unogona sei kuvimbisa iyo yekugadzira mhando?
A7: Takatarisa zvakanyanya tisati tatumira, ichagadzira zvekare mahara kana iri dambudziko remhando kubva kudivi redu
Q8: Ini ndinogona kuwana zvese zvakagadziriswa pano?
A8: Zvirokwazvo hongu; ingo nyoro tipe kuraira zvako zvakasarudzika zvido, isu tichaita kuti basa riitwe.
Pashure: Kutenderera Neck Dhinda Yakareba Sleeve Varume T-Shirt PY-NC003
Zvadaro: Casual Round-Neck Pfupi Sleeve Varume T-Shirt PY-ND005
Yakasarudzika Ruvara Cotton Cargo Varume Bhachi PY -...
Cotton Uye Mucheka Retro V-Neck Long Sleeve Men T ...
Yakasarudzika Logo Yakareba Sleeve Varume T-Shirt PY-NC002
Mufashoni Matanho Zip Hoodies Varume Bhachi PY-MJ005
Hip-Hop Graphic Ipfupi Sleeve Varume T-Shirt PY-ND002
Cotton Zipper Zhizha Varume Mitambo Bhurugwa PY-NK002